Otú E Si Agbaghara Kpamkpam (Ndị Kọlọsi 3:13)
GỤỌ NKE Acholi Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Armenian (West) Aukan Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bengali Bislama Bulgarian Cambodian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Drehu Dutch Efik English Estonian Ewe Fijian Finnish French Ga Garifuna Georgian German Greek Greenlandic Guarani Gujarati Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hmong (White) Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Kannada Karen (S'gaw) Kazakh Kikamba Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kimbundu Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisi Kisonge Kongo Korean Krio Latvian Lhukonzo Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Marathi Maya Mixe Mizo Mongolian Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Northern Puebla) Ndau Ndebele (Zimbabwe) Ngabere Norwegian Nyaneka Nyungwe Nzema Ossetian Otetela Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (Cameroon) Polish Portuguese Punjabi Quechua (Bolivia) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Runyankore Russian Samoan Sango Saramaccan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tok Pisin Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Vietnamese Wallisian Waray-Waray Wayuunaiki Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
IHE E KWURU N’OGE OCHIE NKE KA BARA URU
IHE BAỊBỤL KWURU: “Na-agbaghara ibe unu kpamkpam ma ọ bụrụ na onye ọ bụla nwere ihe mere ọ ga-eji mee mkpesa megide ibe ya. Ọbụna dị ka Jehova gbaghaara unu kpamkpam, na-emekwanụ otú ahụ.”—Ndị Kọlọsi 3:13.
Gịnị ka ọ pụtara? Baịbụl kwuru na onye mere mmehie dị ka onye ji ụgwọ, nakwa na onye gbaghaara mmadụ mmehie dị ka onye kagburu ụgwọ e ji ya. (Matiu 18:21-35) Otu akwụkwọ kwuru na n’Akwụkwọ Nsọ, okwu Grik a sụgharịrị “ịgbaghara” pụtara “mmadụ ịhapụ ụgwọ e ji ya, ghara ịgba onye ahụ ụgwọ.” Ọ pụtara na anyị gbaghara onye mehiere anyị, anyị agaghị atụwa anya ka ọ taa ahụhụ ihe o mere anyị. Ma, na anyị na-achọ ịgbaghara onye mejọrọ anyị apụtaghị na ihe o mere dị anyị mma, ma ọ bụkwanụ na ọ naghị ewute anyị. Kama, anyị anaghị eburu onye ahụ iwe n’obi, ọ bụrụgodị na anyị nwere ‘ihe mere anyị ga-eji mee mkpesa megide ya.’
Ọ̀ bara uru taa? Ebe anyị niile na-ezughị okè, anyị na-emehie ihe. (Ndị Rom 3:23) Anyị kwesịrị ịna-agbaghara ndị mejọrọ anyị n’ihi na anyị ga-emejọkwa ndị ọzọ, chọwa ka ha gbaghara anyị. Anyị gbaghara onye mejọrọ anyị, ọ na-abara anyị uru. Olee otú o si abara anyị uru?
Anyị jụ ịgbaghara onye mejọrọ anyị, na-eburu ya iwe n’obi, anyị na-akpatara onwe anyị nsogbu. O nwere ike ime ka anyị ghara ịna-enwe obi ụtọ, anyị ana-agara onwe anyị, ndụ ana-agwụkwa anyị ike. O nwekwara ike ime ka anyị daa ezigbo ọrịa. Andrew Steptoe na Dr. Yoichi Chida, bụ́ ndị ọkachamara n’ihe gbasara ahụ́ ike, dere n’otu akwụkwọ na-ekwu gbasara obi mmadụ, sị: “Nchọpụta ndị e mere ugbu a na-egosi na iwe iwe na ibu iwe n’obi nwere ike ime ka obi kụchie mmadụ.”
Oleezi uru ịgbaghara ndị ọzọ na-abara anyị? Ọ bụrụ na anyị agbaghara ndị ọzọ kpamkpam, anyị na ha ga-adị n’udo, ọ ga-emekwa ka anyị na ha na-adịkwu ná mma. Nke ka nke, anyị na-egosi na anyị na-eṅomi Chineke n’ihi na ọ na-agbaghara ndị mmehie kpamkpam ma ha chegharịa, ọ chọkwara ka anyị na-eme ka ya.—Mak 11:25; Ndị Efesọs 4:32; 5:1.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Na-agbaghara Kpamkpam